Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 Iwu nke ezumike - RayHaber
HomeGeneralTaa na History: 9 August 1909 Holiday-Equality Law
09 / 08 / 2019 Levent Elmastaş General, Turkey, Taa na akụkọ ihe mere eme 0
ụbọchị nke ezumike ọnwa August na esgal iwu taa
9 August A tọhapụrụ 1909 Holiday-i Equality Law. (Strike Iwu)
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 A hapụrụ Iwu Ezumike-i Equality. (Strike Iwu) 09 / 08 / 2012 9 August A tọhapụrụ 1909 Holiday-i Equality Law. (Strike Iwu)
Taa na History: A tọhapụrụ 9 August 1909 Holiday-i Equality Law 09 / 08 / 2015 Taa na History 9 August 1909 Holiday-i Equality Law wepụtara. (Strike Iwu)
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 Holiday-i tọhapụrụ Iwu Equality ... 09 / 08 / 2016 Taa na History 9 August 1909 Holiday-i Equality Law wepụtara. (Strike Iwu)
Taa na akụkọ ihe mere eme: 9 August 1909 Holiday-i tọhapụrụ Iwu Equality ... 09 / 08 / 2017 Taa na History 9 August 1909 Holiday-i Equality Law wepụtara. (Strike Iwu)
Taa na History: 9 August 1909 Holiday-Equality Law 09 / 08 / 2018 Taa na History 9 August 1909 Holiday-i Equality Law wepụtara. (Strike Iwu)
Taa na History: 28 July 1909 Orient Railways Business Company na 10 ọnwa Ottoman ... 28 / 07 / 2012 28 July 1909 Orient Railways Operating Company 10 kwetara ka a gbanwee n'ime Ottoman Njikọ Ụlọ Ọrụ na ọnwa 28 July 1939 Ụgbọ ala mbụ gara Ashkale
Taa na History: 5 October 1908 Bulgaria na-ekwupụta nnwere onwe ya. 19 April 1909 na ederede Rumelia ... 05 / 10 / 2012 5 October 1869 Babıali nwetara 10 nde francs na nkwekọrịta pụrụ iche na Hirsch ma kwenye ịkwụ ụgwọ n'ime 65 kwa afọ. 5 October 1908 Bulgaria egosiwo onwe ya. 19 kwetara ịkwụ ụgwọ 1909 nde francs na Ottoman Alaeze Ukwu maka akụkụ nke Rumelian okporo ụzọ na n'akụkụ ya na Belova-Vakarel na usoro nke April 42. A kwụrụ 21 nde 500 puku Frank nke ọnụ ọgụgụ a ụgwọ n'aka ụlọ ọrụ Railroad nke East.
Taa na History: 18 January 1909 Baghdad onye nnochite anya Ismail Hakki na Baghdad okporo ụzọ dị na Baghdad Assembly ... 18 / 01 / 2013 Ihe mere eme taa 18 January 1909 Mebusan Assembly Baghdad Mebusu Ismail Hakki jụrụ banyere ụgbọ okporo ígwè Baghdad. Ndi ochichi nke ndi ochichi choro ma choo ihe ndi ozo nyere ndi ala. Hamidiye-Hicaz Gọọmenti Na-ahụ Maka Nchịkwa okporo ụzọ - A na-akpọ M Financez Hicaz Nezareti ma jikọọ ya na Sadaret. N'otu afọ ahụ, e wepụrụ Nezaret ma kwụnye ya.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 25 February 1909 Chester Project nyere ndị ọchịchị 25 / 02 / 2015 Taa na History 25 February 1889 5 dịka nkwekọrịta dị na nkwekọrịta Ottoman-Hirsch. onye ogbago ahụ gara. Onye ọkàiwu Germany bụ Gneist kpebiri ịkwụ Harsch 27 nde 500 puku francs na Alaeze Ottoman. Mgbe mkpebi a gasịrị, Hirsch kpebiri ịhapụ ọrụ azụmahịa ụgbọ okporo ígwè Rumeli. Deutch Bank na Vienna Bank-Verein Vienna Banks Group). Owuzu ezughi oke ma uzo di na German. 25 February 1892 Mehmet Şakir Pasha nyere echiche sultan ahụ echiche İzzet Efendi. Şakir Pasha na-ekwu na a ga-ewu ụgbọ okporo ígwè n'etiti Damaskọs na Medina. 25 February E nyere ndị ọrụ gọọmenti 1909 Chester Project.
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 April 1909 Aha aha nke ụbọchị a bụ Hamidiye-Hijaz Railway ... 19 / 04 / 2015 Na History Today 19 April 1909 Aha nke akara a, nke a maara dị ka Hamidiye-Hicaz Railway, amalitela ka edere ya dị ka Hijaz Railway.
Njuputa zuru oke site na ndi nnochite anya ndi ahia si na Ulo Oru nyocha nke BTSO
Taa na History: 28 July 1909 Orient Railways Business Company na 10 ọnwa Ottoman ...
Taa na History: 5 October 1908 Bulgaria na-ekwupụta nnwere onwe ya. 19 April 1909 na ederede Rumelia ...
Taa na History: 18 January 1909 Baghdad onye nnochite anya Ismail Hakki na Baghdad okporo ụzọ dị na Baghdad Assembly ...
Taa na akụkọ ihe mere eme: 25 February 1909 Chester Project nyere ndị ọchịchị
Taa na akụkọ ihe mere eme: 19 April 1909 Aha aha nke ụbọchị a bụ Hamidiye-Hijaz Railway ...